Ahoana ny fomba hidirana amin'ny sticker WhatsApp | Vaovao IPhone
Farany, rehefa afaka andro vitsivitsy naely tsaho, dia mety tonga ireo taratasy fametaka ofisialy amin'ny resadresaka ny fampiharana WhatsApp, vao manomboka ny safidy an'ity orinasa ity ny orinasa amin'ny kinova ofisialin'ny fampiharana mba hahafahanao mandefa sy mandray ireto sticker ireto.
Tamin'ny voalohany, ireo vaovao ireo dia natao manokana ho an'ireo mpampiasa izay nametraka ny kinova beta, saingy amin'izao fotoana izao ity safidy ny sticker ity dia efa ho hita eo amin'ny fampiharana anao na dia tsy ao anatin'ireo kinova beta ireo aza izahay. Amin'ity tranga ity ny Ny kinova isehoan'ny sticker dia ilay kinova vaovao 2.21.110.15 amin'ny fampiharana.
Ny fomba tsotra indrindra hahatongavana amin'ireto sticker ireto dia ny fanatanterahana ireto dingana manaraka ireto. Voalohany, tsy maintsy ataontsika ny miditra resaka, tsindrio ny sokafy ny lahatsoratra ary kitiho eo amin'ny kianja kely miendrika folio izay miseho eo amin'ny bara. Tsindrio izao ary hiseho tokoa ireo Gif mihetsika, satria eo amin'ny faran'ireo Gifs ireo dia tsindrio indray ilay pejy ary avy eo tsindrio ilay sary famantarana +. Ankehitriny dia manana ny sticker rehetra azo alaina izahay.
Amin'ny sary eo ambony dia afaka jerenao amin'ny antsipiriany tanteraka ireo dingana tsy maintsy harahinao mba hidirana amin'ny sticker amin'ny sary faharoa dia azonao atao ny mahita ny zana-tsipika mainty izay dingana faharoa. Raha vantany vao miditra amin'ny sticker ianao dia azonao atao ny misintona amin'ny alàlan'ny fanindriana ny zana-tsipìka kely miseho eo amin'ny ilany ankavanana ary jereo ireo sticker izay efa nosintominao tamin'ny safidy "my stickers".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ahoana ny fomba hidirana amin'ny sticker WhatsApp
Amin'ity pejy ity, ahoana no ampiasan'izy ireo ny XD mpitrandraka internet izay ny asan'ny stikers amin'ny whatsaap dia efa navoaka ho an'ny besinimaro nandritra ny volana vitsivitsy?
Ny iPhone 13 dia manana 512GB farafahakeliny